2. Jumad-us-Thaani 1439
KUNGANI ABESIMAME UMHLABA WONKE BEVEZA IMIZIMBA YABO NGOKWEDLULELE, BEBE BEZIMBOZA ABAMA-MUSILM?
Ngu Mufti Zubeir Bayat (DB)
Ukonakala - Ifeshini yomhlaba wanamuhla.
Impucuko yasentshonalanga ihleka usulu lapho kuke kwaphathwa amagama afana nesimilo, ukuziphatha kanye nokuhlonipheka. Lamagama athathwa njengokuthi asephelelwe yisikhathi futhi engasayifanele inqubo yokukhululeka nenkululeko engenazithiyo. Ukungaziphathi, ukuhlobonga, ukungabi namahloni nokuphinga sekuthathwa njengezinto eziyintuthuko futhi nezisefeshinini. Ekubeni kube kuyikho kanye okuwumsuka wokubhubha kobumbano lomndeni oqinile. Miningi kakhulu imindeni ebineme kodwa esihlakazekile ngenxa yokungethembeki, nokube sekushiya uhide losizi, izinhliziyo ezibuhlungu kanye nomphakathi ontengantengayo. Ukuphinga nako kuholela emavezandlebeni abantwana abangafunwa nabaphenduka enkulu inkinga le emphakathini, ngenxa yokuswela ukukhuliswa ngabazali okuyikho. Ngempela ukonakala kuyisiqalekiso soluntu kanjalo nomphakathi.
IMelika nomhlaba waseNtshonalanga basanganiswe ngamandla okungaziphathi.
Lelozwe elizigqaja ngokuba yisikhondlakhondla somhlaba sanamuhla, nokuba ngungqa phambili empucukweni yanamuhla, i United States of America isanganiswe ngamandla okungaziphathi. Eminyakeni engemingaki edlulile, u Bill Clinton wabiza imbizo yabaholi bezwe lonke ukuba kuzodingidwa inkinga yentsha engama 15 million esengcupheni eMelika. Namhlanje yonke enye ingane yaseMelika iyivezandlebe (izalelwe ngaphandle komshado). Manje ama 38% ezingane ahlala ngaphandle kukababa oyizalayo; kuthi eziyigidi ezingu 6.6 zona zihlala nabazali asebehlukanisile nabahlala ngabodwana, iningi labo okungomama abayeni asebahlukana nabo, nabavele banyamalale kuhle okomoya ezinganeni zabo. Lena yimpilo yomndeni e Melika. ''Kukhona okungalungile ngayo yonke impilo yomndeni yase Melika,'' kubhala u Martin Marty, inzululwazi e University of Chicago ephepheni i Los Angeles Times. '' Kunomuzwa oxakayo umuntu anawo wokuthi i Melika yizwe elinezingane eziningi kodwa abantu abadala ababonwa.'' Lomfanekiso osabekayo uwumphumela wokusweleka kobuqotho, ukuhlonipheka, kanye nokuzithoba e Melika kanye nakuwo wonkana umhlaba wase Ntshonalanga.
I-Islam iqinisekisa ubuqotho boluntu.
Indlela eyodwa qhwaba nokuyiyona kuphela engabuyisela emuva loku konakala ibuyisele nesizotha eluntwini, wukubuyela endleleni yobuqotho kanye nokuhlonipha. Kungenxa yalesisizathu-ke iIslam iye yabeka isigcizelelo esikhulu odabeni lokuhlonipha. Phakathi kwezimfundiso eziphakeme, i Islam ikhuthaza ngamandla amakhulu umqondo wobuqotho. Ubumsulwa kobuqotho kwamukelwa njengensika yomphakathi owakhiwe wumndeni ohlanzekile. Noma ngabe yini eswabisa ngokubhubhisa umongo wobuqotho bomphakathi kanye nempilo yomndeni kuthathwa njengecala elibi kabi kwi Islam. Isibonelo, ukuphinga, noma ngabe kwenziwe ngongakashadi noma oseshadile, kuyisenzo esilimaza impilo yomndeni eqinile. Akekho umfazi othanda ukuba umyeni wakhe abe nomakhwapheni kanjalo nomyeni. Ngaleyondlela i Islam iye yamemezela ukuphinga njengento engavumelekile. Ukuphinga kuthathwa njengecala elibi kakhulu; umphingi uqalekiswe kakhulu. Ezweni elibuswa ngomthetho we Islam, lelicala lithwele isijeziso esikhulu kunazo zonke ngaphansi komthetho.
I Islam ayigcinanga ngokuqalekisa ukuphinga-nje kuphela. Noma yini ethathwa njengokukwazi
ukuphehla ukukhanuka, noma ekugcineni engaholela ekulingekeni kanye nesono sokuphinga, nayo iqalekisiwe kwabuye kwanqunywa ukuthi ayivumelekile kwi Islam. Ngalendlela, umnyango oya ebubini nasekonakaleni uvaleke ngempela. Kufana nesimo sokuqhelisa utshani obomile bokufulela kude nekloba lomlilo, kunokuzama ukulawula ikloba lomlilo ngethemba lokuthi utshani ngeke buhangulwe wumlilo. Lesisifanekiso sishwankathela inqubo ye Islam kanye nendlela ubuqotho obuthathwa ngayo uma kuqhathaniswa naleyo yase Ntshonalanga. Eminye yemithetho eyamukelwe yi Islam ukuvikela nokuqhakambisa ubuqotho, wukuvinjwa kwehlo lokukhanuka phakathi kwabesilisa nabesifazane.
Izevatho ze-Islam zinika abesimame isithunzi, zilondoloze nobuqotho.
Omunye umthetho.yilowo ogcizelela ukumboza lezozindawo zomzimba ezikhuthaza imizwa yokukhanuka kanye nomunyu. Konke lokhu kuqoqelwe endleleni yokugqoka kwe Islam. Owesimame, nogcwele ithonya kanye nobuhle bendalo, uyalelwe ukuba amboze zonke lezizizitho zomzimba wakhe. Nabesilisa nabo kuyadingeka ukuba bamboze ezinye zezitho zemizimba yabo. Ezithweni abesimame bama Muslim okumele bazimboze yizinwele zabo, imilenze, izingalo- kanye nobuso, uma besezindaweni zomphakathi.Ubuso bowesimame yisona senza samuntu sobuhle bakhe kanye nesidonsamehlo esikhulu somzimba wakhe. Lokhu kumboza akugcini ngokukhubaza unkunakwa kwakhe okungadingekile, kodwa kubuye kumnikeze izinga elithile lokuhlonipheka, udumo kanye nesithunzi nokuthi abe nokuziphathela yena umzimba wakhe abuye ezwe umuzwa wokuba namandla phezu komzimba wakhe, konke abalingani bakhe abahlale bebukisa ngemizimba yabo abemukiwe kona.
Isizotha ekugqokeni sithathwa njengesimo esifanayo kwabesimame bama Khrestu, bama Juda, bama Hindu kanjalo nabama Muslim basemandulo. Izithombe zabafazi bama Bhunu ukwenza isibonelo, zikhombisa ngokucace bha isizotha ekugqokeni kwabo. Izingubo zabo ezinde ezivulekile, kanye nemihele yabo eyayifihla izinelwe zabo kanye nengxenye yobuso babo, kufakazela leliphuzu. Sekungenxa yezimfundiso zokona zesimanje manje eseziholele abafazi baseNtshona sebezithola belahlekelwe isizotha sabo semvelo, kwaze kwafika isigaba ngesigaba, lapho ukugqoka izigqebhezana ezincane noma ukuzishayela ngesudi yesele sekuthathwa njengento esefeshinini kwabesifazane. Kwathi ukugqoka izevatho kwaphenduka umkhuba wakudala nosuphelelwe yisikhathi. Laba abesimame abalusizi baseNtshonalanga kunokwenzeka bangakuphimisi ngemilomo yabo, kodwa bafela ngaphakathi okwebutho likaZulu mayelana nesizotha kanye nokuhlonipheka kwabesimame sama Muslim. Uma-nje abafazi bama Muslim bengakuthokozela lokhu babuye babambelele baqinise ezindleleni zabo eziyigugu okwegolide! Insha Allah
The Name of Quraish